Kuvuka iminjunju elanda ngokubona abangani ababili bemuka nomfula - Ilanga News
Home Izindaba Kuvuka iminjunju elanda ngokubona abangani ababili bemuka nomfula
Kuvuka iminjunju elanda ngokubona abangani ababili bemuka nomfula
Intombazanyana ithi kayisalali ebusuku, kubuya isithombe sabangani bayo bememeza, becela usizo
ABATSHUZI basaqhubeka nokuthungatha isidumbu sikaPholisani Sithole (14) waseSiphahleni, nesikaMbali Mthembu (15), waKwaZashuke abamuke
nomfula emasontweni amabili edlule.
IVUKWA yisibibithwane uma ichaza ngento eyayibona intombazanyana yaseSi-phahleni, eBulwer, ngesikhathi abangani bayo ababili, eyayiphuma nabo engomeni, bemuka nomfula ibhekile ingenakwenza lutho. Le ntombazanyana ithi umfula wawudla izindwani, lungekho usizo eyayingeza nalo ukubahlenga ngaphandle kokuhlaba umkhosi kubantu abadala. UThabisile Majola (15) (owabona lesi sigameko), uthi kabusafiki nobuthongo ebusuku ngobuhlungu abuzwa ebona kumuka nomfula uPholisani Sithole (14) waseSiphahleni noMbali Mthembu (15)
waKwaZashuke ntambama mhla zimbili kwephezulu.
Uthi okumcindezela kakhulu ebusuku wukunkeneneza ezindlebeni zakhe kwesililo sabo bememeza, becela usizo ngesikhathi begwiliza emfuleni owawugcwele. ILANGA langoMsombuluko mhla ka-4 kwephezulu libike ngesiphe-pho ebesihlasele izingxenye ezithile zaseBulwer ngaphansi kukaMasipala iDkt Nkosazana Dlamini Zuma, esifundeni iHarry Gwala, esashiya kucekeleke imizi engaphezulu kuka-300.
Kusona lesi siphepho kwashona u-Asemahle Ntuli (5) waseBethle-m owawelwa wuphahla esendlini ayehleli kuyona namalungu omndeni wakubo. Ekhuluma neLANGA uThabisile ngeledlule obesendleleni yokuyolulekwa ngokomqondo ngosonhlalakahle boMnyango wezokuThu thukiswa koMphakathi eBulwer, nabanye abangani bakhe ayenabo ngesikhathi kumuka uPholisani noMbali, uthe kasisuki emqondweni isithombe sento ayibona kumuka abangani bakhe.
“Sasiphuma emcimbini wokuhanjiswa kwehhashi esigodini saseMphithini, sathi sesibuya, safica umfula iSiphahleni sewugcwele lapho kuwelwa khona. Mina ngangingeke ngiwele ngoba ekhaya kwakunganeno komfula. “OPholisani noMbali, bathi bazowela ngoba umfula kawu gcwele kakhulu. Ngababona bethathwa ngamanzi bamemeza becela ukusizwa, kwanzima kimina ukungena emanzini ngoba ayemaningi kakhulu. “Ngagijimela ekhaya ngatshela umama ngokumuka kwabo, kwabizwa abantu babhekwa bangatholakala. “Selokhu kwenzeke le nto,
kangisalali kahle ebusuku, ngisa-thukile ngoba isithombe sibuya sinjengoba sinjalo,” kusho uThabisile ekhihla isililo.
Ngempelasonto ILANGA lihabu-le ukuthi kunelungu lomphakathi ebeligudla umfula uMkhomazi liyolanda izinkomo emadlelweni, elizithele phezu kwesidumbu sowesifazane ebesesonakele osebeni lomfula. Lihlabe umkhosi emizini esesigodini saKwaNonguqa kwabizwa amaphoyisa asithatha ngenhloso yokudluliselwa kwabazosihlola ukuthi kakusona yini esala mantombazane amukile. UMnu Vusi Mthembu, oyikhansela laku-ward 12 kumasipala iDkt Nkosazane Dlamini Zuma, ukuqinisekisile ukutholakala kwesidumbu sowesifazane emfuleni uMkhomazi, esithathwe ngamaphoyisa aseBoston, sadluliselwa emakhazeni kahulumeni eHowick. “NgoMsombuluko sihambe nemindeni yamantombazane saya emakhazeni kahulumeni eHowick. Sisibonile isidumbu noma kube nzima ukusihlonza ukuthi ngesikabani ngoba sonakele. “Nakuyona imindeni yamantombazane kube nzima ukuqinisekisa ukuthi ngesikabani, ngakho sesizolinda amaphoyisa ngokwenza ulibofuzo ukuze kutholakale ukuthi ngesayiphi kulamantombazane,” kusho uMnu Mthembu
Previous articleBanengcindezi yokulanda izidumbu abangcwabi
Next articleKUSHONE IZINGANE ZANDAWONYE ZIWELISANA EMFULENI OYINGOZI